Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Belgian Nhabvu Vatambi Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhodhi Wizard iyo inonyanyozivikanwa neNicknames; 'Chibereko chakarambidzwa'Uye'Nyoka'. Yedu yeEdheni Hazard Childhood Story pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mhuri fife uye vazhinji OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange.
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -Early Childhood
Kubwinya Kwemucheche Upenyu hweEdheni Hazard
Edheni Michael Hazard akaberekerwa muLa Louviere asi akakurira muBraine le Comte. Wake zita reamai ndiCarine & zita rababa ndeye Thierry. Zvinonakidza kuziva kuti vose amai nababa vaiva mabheji. Bhora rakagara nhaka kuna Hazard kubva kuvabereki vake.
Akakurira muBraine-le-Comte, Belgium. Mhuri ichiti ivo vairarama "kwete kupfuura mamita matatu" kubva pakudzidziswa kwebhola, iyo Edheni yaipedza maawa akawanda ichikudza unyanzvi hwake hwemazuva ano.
Amai vake, Mai Carine Njodzi yaimbova mutambi wemutambo muBelgian Women's First Division. Mushure mokuroorana ari pamuviri wehutano, akarega kutamba asi baba vake, VaT Thierry Hazard vakaramba vachitamba.
Dambudziko reEdheni uye Vabereki
Baba veHazard vakanyatsotaridzirwa nepamhando yepamhizha yepamusoro neLa Louviere nechechipiri cheBelgian. Kutamba kwababa vake kwaiva mudzimu wakadzivirira. Mushure mokutamba bhora, Vabereki vose vakava mapurofesa emitambo. Thierry akarega kubva panzvimbo yake mu 2009 kuitira kuti atore nguva yakawanda kuvana vake.
Neimwe yevatambi vakakurumbira mumazita evabereki vavo & mutambo webhora, Edheni nevehama dzake dzose 3 vakapedza hupenyu hwakanaka. Vamwe vanun'una vake vaduku ndiEtan & Kylian. Ethan akatamba wechidiki chechikoro, uye mugore ra2013, Kylian akabatana ne White Star Bruxelles.
Upenyu hwemhuri hweEdheni Hazard
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -The Hazard Brothers
Anozivikanwa kuti ane hama dze3 dzinonzi Thorgan, Kylian & Ethan. Ndiye mwanakomana wedangwe wevabereki vake. Vose vehama dzake vanomhanya, saka iwe unogona kudana Hazard nemhuri a football family pamwe neboka revatambi vechi7. Mukoma wake Thorgan Hazard akabatanawo naye mubhizimisi rake rekambani Chelsea mugore re 2012.
Dambudziko Rehama (Upenyu Hwekutanga)
Njodzi ndiyo yakwegura yevana vana. Ane vanakomana vatatu, uye vose vanotamba bhora.
Dambudziko reEdeni (rakanyanyisa) uye hama
Thorgan akaendeswa kuCentral, uye akakweretwa kuBerggian Club Z. Waregem. Dzimwe hama dzeHazard dzechiduku dziri Kylian, 17, uye Ethan, 8. MunaAugust 2011, Kylian akabatana nechechi yechidiki yeLille mushure mokunge mutambo waibvumirana kumubvumira kupinda mubhizha paakashandura 16, asi Ethan achiri muBelgium achitamba pachikwata chechidiki chechikwata cheEdheni chaimbova Tubize.
Kylian, Edheni uye Thorgan Hazard
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -Pakutanga Football Career
Sezvo akanga ari mucheche wemubhedha, Edheni yakabatana nechikwata chake chekutanga chebhodhi rainzi Royal Stade Brainois. Akanga ari 4 chete paakazobatanidza chikwata ichi. Bhuku rake rinotevera raiva Tubize. Akatamba kwemakore anenge 8 mune iyi klabhu. Akanga ane nyanzvi zvokuti vadzidzisi vake vaiwanzoti "aiziva zvose. Ndakanga ndisina chinhu chokumubatanidza ". Vakamuti "ane mhando" mutambi.
Bhora Rokutanga Upenyu hweEdheni Hazard
Bhuku rake rakatevera raiva Tubize, Achiri kutamba muchikwata ichi, nhengo yeFrance yeLlabhu yakamuona ndokupa chikwata chekutamba chechikwata chavo. Apo Lille nhengo akataurirana nababa vake pamusoro pekugovera uku, akabvuma uye akabvumirwa Edheni kuti uite iyi chikwata cheFrench.
Mazuva Ekuyaruka KweEdheni Inobatsira Vechiduku
Lille akatanga kumudzidzisa kuchikoro chemunharaunda kwemakore anoda kusvika 2. Zvadaro musi wa 28 May 2007, akabatanidzwa kuenda kuChirungu cheLille. Hazard yakaita chikwata chake chekutanga mumusi we 1 September 2007 mumutambo wenhabvu neRace club deFrance ichiita sechikamu chechipiri chakatsiva mu3-1 kukundwa. Pachikwata ichi, akaita chimiro che 147 umo akawana 36 zvinangwa kubva 2007 kusvika ku2010.
Akazobatana naye novotel chikwata chikuru muzita reChristian football club mu 2012. Mutambi wekare weLille wechirungu akabatana nekiki ichi kutengesa mari ye 32 mamiriyoni emadhora. Paainyorera nekibhu, akaudza "Ndiri kufara pakupedzisira kusvika pano. Icho chikwata chakanaka & ini handigoni kumirira Kutanga". Ari paCentral akawana 17 nhamba Jersey. Kupikisana neSeattle Sounders, akaita kuti aonekwe kwekutanga kwechikwata ichi chitsva.
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Hazard's romance inodzokera shure achiri muduku. Mukadzi weChristian weConfronta akasangana nomudzimai wake Natacha pazera remakore 14, uye akaroora paudiki hwake sweetheart mu2012, makore maviri mushure mokunge vana vacho vaine mwana wavo wekutanga Yannis (Akaberekwa musi wa XNUMtember, 19).
Dambudziko reEdeni Rudo Nyaya
Vakabva vaine mwana wechipiri, Leo. Kune tarisiro yevatambi vatsva vemhuri imwechete sezvo vose vari vakomana.
Hupenyu Hwemhuri hweEdeni Njodzi Edheni Njodzi: Kupedza Nguva neMhuri
Eden Hazard inonzwisisa kuti kushandisa mari yakanakisisa nguva nevana vake kunokosha zvikuru pakukura kwavo uye mufaro. Izvi zvinomupa mukana mukuru wekubatana nevana vake.
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -Childhood Hero
Anobvuma kuti kugamuchira kurumbidzwa kubvira muhutatu hwehuduku Zinedine Zidane kwekutanga ke "wakakosha" ndokubva amusiya achidedera.
Utano Hondo Hero yeEdeni Hazard
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -zvinhu
Njodzi inopfuura kudarika mutambo wekamuri. Anoda kutamba uye akava nguva pfupi iyo YouTube inosvika apo mutsara wekukwira pamusara wekuratidzwa kwepromptu panguva yekushanda kubva kuna Christina Milian yakabuda paInternet.
Njodzi inonyanya kukanganisa NBA, uye inonakidzwa nokuona Basketball. IBelgium inobvuma kuti kunyange zvazvo asina kumbobvira aona mutambo muAmerica, timu yake inofarira ndeyeNew York Knicks uye anonyanya kufarira mutevedzeri Carmelo Anthony.
Kunyanya zvakadaro, anofarira kutamba. Akambomuka pamusana pekuratidzwa kwepromptu panguva yekushanda kubva kuna Christina Milian pamusangano weDidier Drogba, nheyo yaive yakabuda paYouTube.
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -motokari
Iye anozivikanwa kushandisa zvigaro zvemotokari zvisiri izvo chete zvakakodzera, asi zvine zvose-zvakapoteredza usability uye civility. Wake R8 V10 Guru rinopa rutsigiro rwakanaka uye runyararo pasinei neasingashanduki kushamisika uye rubber-band Pirelli matairi. Inokosha pa $ 164,150.
Motokari yeEdheni Hazard - 2016 Audi R8 V10
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -Chitendero (Kuva Nokutenda Mubindu reEdeni)
Sezvo Edheni yakanga yakwegura zvakakwana kuti iverenge Bhaibheri, haana kumbobvira akakahadzika kuti Bindu reEdheni rakatumidzwa zita rake uye kuti Adhamu naEvha ndivo vavengi vake vakapika nokuda kwekudya michero yake vasingabvunzi mvumo yake kutanga.
Chitendero cheEdheni Hazard (Kutenda Mubindu reEdeni)
Dambudziko reEdheni Njodzi Yenyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts -Kuonana naBolboyboy
Chelsea star Eden Hazard yakatumirwa kunze kweChikwata Chekutanga cheComparative Cup Cup musi wa 23 January 2013 mushure mokukandira bhobho Charlie Morgan, 17, sezvo akaedza kutora bhora zvakare.
Kutarisana neEdheni Hazard neBolboyboy
Nekukwikwidza kwakaitwa ne Swansea 0-0, uye Chelsea maviri pasi kubva pachigamba chekutanga, Hazard akavhiringidzika neawawasting. Akazotaura tsitsi.
Ballboy Charlie Morgan Kunzwa marwadzo kubva kuEdheni Hazard's Kick
Redknapp inonzwisisana naHazard uye inobata Morgan kuti aite zvechiitiko chacho. "Njodzi inokonzera bhora pasi pemuviri wemukomana. Sei mwana wacho akarara pabhota pakutanga? "Akadaro. "Unogona kufungidzira kushungurudzika - iwe uri mutambi achiedza kusvika mukombe wokupedzisira asi pane mwana uyu achiita sechidimbu uyo ​​asingazokupi bhora zvakare.
Izvo zvakakodzera kutaura kuti mukomana wacho ari kutumira tambo pamberi pemutambo kuti iye akaisvonaka nguva-waster.
Lille OSC Nhabvu Dairy
Tariq Lamptey Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Billy Gilmour Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Fikayo Tomori Kukura Kwemhuri Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Lucas Digne Mwana Wevacheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Reece James Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Callum Hudson-Odoi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts